Jubbaland oo hanatay tartanka Maamul goboleedyada Soomaaliya, kana aar goosatay Puntland | Ciyaarside.com
Jubbaland oo hanatay tartanka Maamul goboleedyada Soomaaliya, kana aar goosatay Puntland
Tartanka maamul goboleedayada Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey garoonka Koonis degmada C/casiis ee gobolka Banaadir, halkaasoo ay kulankii final-ka galabta ku wada ciyaareen sanadkii labaad Jubbaland iyo Puntland.
Kooxda ku ciyaaraysay magaca Jubbaland ayaana ku guuleysatay tartankan kaddib markii ay 1-0 uga badiyeen Puntland oo koobkan difaacanaysay maadaama ay sanadkii hore ku guuleysteen.
Yoonis C/raxmaan Maxamed ayaa Jubbaland u dhaliyey goolka ay guusha ku qaateen oo ay ku hanteen Koobka maamul goboleedyada Soomaaliya.
Waxa uu Yoonis dhaliyey mid ka mid ah goolasha ugu qurxoonaa ee tartanka kaas oo inta labo ciyaartoy si xirfad leh ku dhaafay si xawaare ah kubadda ugu dhaqaaq dhanka goolka Puntland, ka hor inta uusan si jarmo ah goolka u toogtan.
Waxa ay ciyaartu ku soo dhammaatay 1-0 ay guusha ku qaateen xulka Jubbaland, kuwaasoo ka aar goostay dhiggooda Puntland oo sidaan oo kale inta final-ka wada yimaadeen sanadkii hore rigooreyaal kaga qaaday tartanka.